Semalt Inowedzera pa URLitor - Very Cool Web Kugadzira & Data Kuchengeta Tool
Kuti ushandise URLitor, iwe unongoda kuwedzera runyoro rwema URLs zvese zvaunoda kutsvaga paIndaneti mune template yakapiwa. Zvadaro unofanirwa kujekesa HTML chinhu chaunoda kubvisa kubva pawebhu uye chovha pakutumira mutsara. Zviri nyore sezvakaitwa izvozvo. Nechirongwa ichi, haufaniri kuita kopi kana kudonha kubva pakushandura zvakare.
xPath mutauro unoshandiswa kutsvaga ruzivo mufaira re XML. Inoshandisa mamwe mazwi kuti usarudze node-seti kana nodes mu XML mafaira. Mashoko ayo XPath anonzwisisa akafanana chaizvo neaya anoshandiswa nekombiyuta mafaira kana zvinyorwa.
Kunyange zvazvo XPath inoshandiswa nemitauro yakasiyana-siyana, chirongwa ichi chakavakirwa kune vashandisi vasina ruzivo rwekugadzira. Saka, haufaniri kuva muveiridzi wekushandisa kwayo. Nechirongwa ichi, unokwanisa kubvisa deta kubva pamapeji akawanda e HTML uye XML.
Kuti zvinyatsoshandiswa, zvinyorwa zvinowanzoshandiswa XPath zvinyorwa zvakafananidzirwa mumusidho unodonha kuitira kuti vashandi vazofanira kusarudza chero ani zvake zvichienderana nechinangwa chavo. Zvisinei, vashandisi vane ruzivo rwe XPath vane rusununguko rwekushandisa maitiro avo kana vachida..
Chigadzirwa chacho chakagadzirwa nekwanisi ye100 URL muchitambo chimwe chete chekuchera, uye zvinotora zvishoma zvemashoko gumi panguva imwe chete. Mune mamwe mazwi, inogona kudonhora dhamusi kubva pane mazana makumi maviri eEvhisi panguva imwe.
1. // div  - (div) 2) - Iri sumo rinosarudza rechipiri div hierarchically;
2. // link [@ rel = 'canonical'] / @ href - Iri sarudzo inosarudza nzvimbo (ref) ye tag inoshandiswa sarudza chirevo chechimiro chakaenzana ne canonical;
3. / html / head / meta [@ name = 'description'] / @ zvinyorwa - Mashoko aya anoshandiswa pakusarudza zvigadzirwa; 4. // * [@ class = 'class-name'] - Unogona kushandisa mazwi aya kuti usarudze zvinhu zvose ne 'class-name' se CSS class;
5. // h2 | // chinyorwa - Iri izwi rinogona kushandiswa kusarudza zvose zvirikutanga H2 uye chinyorwa cheji;
6. // * [zita
= 'h1' kana zita
= 'title'] - Mashoko aya anoshanda zvakafanana neaya pamusoro apa. Zvisinei, mazwi anotaurwa pamusoro apa ari nani sezvo ari mashoma; - 30 - Iri sarudzo rinosarudza zvinhu zvose zvine CSS muchikoro uye zvinewo 'chigumbuso'
8. // mubereki :: * [text
= 'Gamuchira'] - Mashoko aya anosarudza mubereki pane chero chinhu chine 'Welcome' ';
Iri shanduro ibhizinesi reBeta uye rinogona kushanda nemamwe mapfumo. Zvisinei, ichiri chigadziro chikuru kune vashandisi vane ruzivo rudiki kana kuti kwete ruzivo rwepurogiramu sezvo mazwi ose anoshandiswa kakawanda anoshandiswa akafanorongwa mukati memenyu sezvakambotaurwa kare Source .